Mobilada ugu fiican ee leh kamarad wanaagsan - Sebtember 2021 | Androidsis
Faa’iidooyinka ugu waaweyn ee ay keeneen imaatinka taleefannada casriga ah waxaa kamid ah inay noo ogolaadeen inaan booska ka baneyno jeebabka iyo boorsooyinka. Mar dambe uma baahnin inaan qaadno aalad aan wicitaanno ku sameyno, qalab kale oo aan ku gaarno halka aan u socono, qalab kale oo aan ku dhageysaneyno muusigga ... Taleefanka casriga ahi waa intaas oo mid, oo dabcan, sidoo kale waa kamarad.
Sanado badan kaamirooyinka casriga ah wax badan ayaa is beddelay; Oggolaanshaha kuwa daahirinta badan leh (iyo xirfadleyda) waxay ku dhowaadeen inay la jaan qaadaan kamaradaha SLR si loogu adeegsado xirfadeysan. Hadda waxaan ku qaadan karnaa sawirro tayo leh oo aan la socon karin mobilada iyadoo ay ugu wacan tahay muraayadaha indhaha ee isku dhafan ee noocyada muhiimka ah iyo kuwa caanka ah sida Leica ama Sony, si kastaba ha noqotee, kamaradaha oo dhan kama wada muuqdaan taleefannada oo dhan waa isku mid waana sababtaas maanta ayaan kuu soo qaadaney telefoonnada gacanta ee leh kamaradda ugu fiican.
1 6da taleefan ee leh kaamirada ugufiican maanta
1.1 Samsung Galaxy S8 iyo S8 +
1.2 Google Pixel iyo Pixel XL
1.5 Sharaf 9
2 Waxyaabaha muhiimka ah markaad dooranayso taleefanka kamaraddaada
2.1 Megapixels badan ayaan had iyo jeer la mid ahayn tayada sare
6da taleefan ee leh kaamirada ugufiican maanta
Markaan dib u eegis ku sameyno qaar ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ay tahay inaan ilaalino markii aan dooranayno taleefan casri ah kamaraddeeda, iyo ka dib markaan ceyrinay khuraafaadka megapixels, aan aragno waxa ay yihiin. telefoonnada gacanta ee leh kamaradda ugu fiican Ka imanaya suuqa.
Samsung Galaxy S8 iyo S8 +
Hada, the Samsung Galaxy S8 Waxaa loo tixgeliyaa casriga casriga leh kamaradda ugu fiican suuqa. Sidii jiilkii hore, way is dhexgashaa teknoolojiyada laba-pixel awood u leh inuu diiradda saaro isla markiiba xaaladaha dhalaalaya Si kastaba ha noqotee, markan dareemayaasha waxaa soo saaray Samsung lafteeda, mana ahan Sony.
Waxay leedahay a hawada sare f / 1.7 (Ma xasuusataa wixii aan sheegnay ka hor intaan la furin?) Xaaladaha iftiinka hooseeya sidoo kale waxay awood u leedahay inay si dhakhso leh diiradda u saarto oo ay ka soo qabato iftiin ka badan kamarad kasta oo kale oo casriga ah.
Galaxy S8 iyo S8 + waxay bixiyaan a habka gacanta taas oo aan ugu mahadcelin karno wax ka qabashada, dareenka ISO ama dheelitirka cad. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waxay awood u leedahay inay duubto fiidiyowga xallinta 4K, si dhakhso ah ama gaabis ah iyo wax ka badan.
Google Pixel iyo Pixel XL
Mid kale oo ka mid mobilada oo leh kaamirada ugu fiican suuqa hadda jira ayaa ah taxanaha Google Pixel y Google Pixel XL, tanina waloow ay yihiin taleefanno casri ah oo la bilaabay 2016 dhawaana la cusbooneysiin doono.
Dareemaha ugu weyn waa 12,3 megapixels qaab 4: 3 ah oo cabbirka pixel-ka uu yahay 1,55 µm iyo furitaanka muraayadaha indhaha, kani waa f / 2.0 (aperture ka yar Galaxy S8) sidaa darteed waxay qabataa iftiin yar yar.
Muuqaal kale oo aad u xiiso badan ayaa ah inay leedahay xasiliyaha elektarooniga ah halkii aad ka heli lahayd xasiliyaha indhaha, markaa waxaad u baahan doontaa inaad xoogaa garaac wadne garaac ah sameyso, oo aan aad u badneyn markii aad duubeyso fiidiyowga sida sawir qaadista.
Laakiin waxaan ku adkeyneynaa, kamaradda Pixel iyo Pixel XL waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Laga yaabee sidaad horeba u maleyn laheyd, the LG G6 Waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah taleefannada leh kamaradda ugu fiican maanta, tanina waxaa ugu wacan iyada laba kamaradood oo waaweyn oo ah 13 megapixelMidkood oo leh f / 1.8 aperture, xagal 71º iyo nidaamka xasilinta indhaha, iyo kan kale oo leh xagal ballaadhan oo f / 2.4 ah oo awood u leh inuu sawirro ka qaado 125º ka ballaaran yahay kamaradaha kale ee tartanka ku jira.
Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale waxay leedahay habka gacanta iyo wax ay sawir qaadayaasha ugu xirfada badan ay jeclaan doonaan: waad awoodaa ku keydi sawiradaada qaab RAW. Mana iloobi karno indho indheyn indho-indheyn ah oo adeegsadayaashu u qeexaan inay yihiin kuwo si siman u siman.
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee 'Sony lenses' ayaa had iyo jeer u taagnaa tayadooda, sidaa darteed ma aha wax lala yaabo in laga helo xulashadan Sony Xperia XZ leh kamaradeeda ugu weyn 23 megapixels (in kasta oo aad horay u tiri in tirada xildhibaanada aysan ahayn waxa ugu muhiimsan) iyo a autofocus aan caadi aheyn. Waa kamarad bixisa sawir qaadasho leh hufnaan iyo faahfaahin la yaab leh.
Waxa kale oo xusid mudan joogitaanka a shidma iftiinka jawiga kaas oo cabiraya heerkulka midabka isla markaana sixi kara dheelitirka cad si hufan.
Sida Pixels, halkan waxaan sidoo kale ka heli a xasiliyaha sawirka elektarooniga ah, aad ugu habboon fiidiyowyada.
In kasta oo ay tahay mid ka mid ah calamadihii ugu dambeeyay ee la sameeyay muuqaalkeeda, Sharafta 9 waa mid ka mid ah taleefannada leh kamaradda ugu fiican xilligan.
Waxay leedahay laba qol oo leh a 20 MP monochrome sensor iyo mid 12 MP RGB sensor ah oo leh iskudhaf isku dhafan. Shirkaddu waxay xaqiijineysaa in labada kamaradood ay sifiican isku fahmaan, iyagoo si sax ah faahfaahin uga bixinaya, midabbo badan oo muuqda iyo sawirada ilaa 200% dhalaalayaxitaa marka xaaladaha iftiimintu aysan ahayn kuwa ugu fiican, intaas oo dhanna waxaa ugu mahadcelinaya "tiknoolajiyada xulashada pixel-ka qaaska ah". Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kujirtaa a 3D panorama iyo a qaabka sawirkaLabaduba waa cajiib.
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan faahfaahinta xaruntan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la tashato falanqayntaan oo dhameystiran oo leh faahfaahinteeda oo dhan, qiimaha iyo helitaankiisa.
Mid kale oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu dambeeyay laakiin sidoo kale mid ka mid ah taleefannada leh kamaradda ugu fiican waa OnePlus 5. Khilaafaadka marka laga reebo u ekaanshaha taleefan gaar ah oo tartamaya, OnePlus 5 sidoo kale wuxuu wataa a dejinta laba kamaradood oo leh autofocus by ogaanshaha wajiga. Mid ka mid ah waa 16 megapixels oo leh aperture f / 1.7 halka kan labaadna uu yahay 20 megapixels oo leh aperture f / 2.6. Sidaa darteed, waxay awood u leedahay inay qaaddo sawirro cajiib ah oo fiiqan, oo leh midabyo dhalaalaya oo firfircoon, sidoo kale waxay awood u leedahay inay ku duubto fiidiyow 2160p xallinta 30 fps.
Iyo illaa iyo hadda xulkeenna taleefannada gacanta oo leh kamaradda ugu fiican. Dabcan qaar baa naga maqnaan doona maxaa yeelay, ka dib, waa xulasho. Intaa waxaa dheer, moodello cusub ayaa si joogto ah u soo baxaya kuwaas oo bixiya kaamirooyin ka fiican oo ka wanaagsan sidaa darteed waxaa suuragal ah inaan si dhakhso leh ugu soo laabanno si aan u cusbooneysiino liiskan. Sidaas oo ay tahay, xusuusnow in waxa muhiimka ahi ay tahay in la ilaaliyo dhinacyada sida kuwa aan soo sheegnay bilowgii iyo wixii ka sarreeya, dooro mobilada sida ugu fiican u daboolaya baahiyahaaga.
Waxyaabaha muhiimka ah markaad dooranayso taleefanka kamaraddaada
Markaad dooranayso taleefan gacmeed cusub oo beddelaya terminaalkeenna hore, waxaa jira dhinacyo badan oo ay tahay inaan tixgalino. Sida iska cad, inteena badan ayaa ku xaddidnaan doonta miisaaniyadeena, si kastaba ha noqotee, markii aan ogaano halka aan aadi karno, way ku habboon tahay in si faahfaahsan loo baaro dhinacyada muhiimka u ah sida cabirka shaashada iyo tayada, ka awood iyo waxqabad taleefanka, booska keydinta gudaha in aan u baahanahay (gaar ahaan ka fikirida codsiyada, si aan u gaabin), awoodda batteriga iyo ismaamulka iyo dabcan, kaamirada wali taagan iyo tayada sawirada aad qaadi karto iyo fiidiyowyada aad duubi karto.
Mar kasta oo aan kuu soo qaadanno xulashooyinka taleefannada gacanta ee 'Androidsis', iyadoon loo eegin qiimaha aan ka hadlayno, waxaan ku adkeysaneynaa arrin aasaasi ah: taleefanka ugu fiican maahan inuu noqdo midka ugu qaalisan, ee uusan aheyn midka ugu caansan, casriga ugu fiican ayaa ah midka sida ugu fiican u buuxiya baahiyaha shaqsiyeed iyo filashooyinka isticmaale kasta.
Sidaa darteed, haddii aad la dhacsan tahay adduunka sawir qaadista iyo, ha ahaato heer xirfadeed ama heer hiwaayad, waxaad la dhacsan tahay qabashada xilliyada ugu wanaagsan nolosha iyo abuurista run ahaantii mid gaar ah, asal ah, cajaa'ib iyo tayo sare leh, Waa inaad bixisaa dareenka koowaad ee astaamaha kamaradda taleefanka. Waxaanan horeyba u rajeyneynaa in, markan, isbeddelku uusan noqon doonin mid raqiis ah. Sida ku jirta warshadaha kamaradda SLR, kaamirooyinka ugu fiican waxaa laga helaa taleefannada gacanta ee ugu qaalisan, inkasta oo midka ugu fiican uusan qasab ahayn inuu ahaado midka mideeya taleefoonka ugu qaalisan.Laakiin aan u kala gudubno qaybo ka mid ah, waxaan ka sii hormarayaa naftayda: maxaan fiirineynaa markaan u dooranayno taleefanka gacanta kamaraddiisa?
Megapixels badan ayaan had iyo jeer la mid ahayn tayada sare
Muddo dheer, iyo malaha sababo suuqgeyn ah awgood, tayada kamaradaha taleefanka gacanta waxaa lagu cabiray tirada megapixels (xildhibaanka badan, tayada ayaa ka saraysa). Saldhigani wuxuu ku qabsaday adeegsadayaasha ilaa heer ilaa maanta xitaa qaar badani sii wadaan inay ku saleeyaan xulashadooda, hase yeeshe, runtu waa taas kamaradda ugu fiican maahan inay noqoto midka ugu megapixels badan. Xaqiiqdii, tirada ugu badan ee megapixels waxaa loola jeedaa xalka ugu sarreeya. Xaqiiqdii, markaan ka hadlayno dareemayaal yaryar, tiro aad u tiro badan ayaa noqon karta qodob ka soo horjeedda maxaa yeelay pixels ka badan ayaa isku meel ku jira, way yaraan doonaan sidaa darteedna, waxay qabsan doonaan iftiin yar. Iyo markiisa, qaddarkan hoose ee iftiinka wuxuu sababi doonaa kororka buuqa, taas oo ah, tayada sawirka oo ka sii xun Sidaa darteed, isbeddelka sanadihii la soo dhaafay ayaa ah pixels ka yar, laakiin ka weyn.
Nidaamka diiradda iyo optics-ka ayaa ah qodob kale oo muhiim ah marka la go'aaminayo taleefannada leh kamaradda ugu fiican.
Shirkado badan ayaa doortay inay ku daraan a tiro badan oo muraayadaha indhaha ah taleefannadooda casriga ah maxaa yeelay tan waxaad ku yareyn kartaa ama ka fogaan kartaa qallooca. Oo si toos ah ula xidhiidha iftiinka (sidii markii aan ka hadlaynay pixels), furitaan focal weyn waxay u oggolaan doontaa xaddi badan oo iftiin ah inuu ku dhaco dareeraha. Marka tan laga hadlayo, waa in aynaan iloobin in marka aan ka hadlayno furitaanka focal, tiro yar ay muujineyso furitaan ka weyn, tusaale ahaan, f / 1.7 waxay u oggolaaneysaa dhacdo ka weyn ama marin iftiin ka badan f / 2.2.
Iyo illaa inta nidaamka diiradda la saarayo, ka autofocus dhakhso leh waxay ku kala duwanaan doontaa qabashada goob ama mid inaga baxsata.
Shaki kuma jiro in mobilada leh kamaradda ugu fiican ay daryeeli doonaan qaybaha iyo dhinacyada aasaasiga u ah diiradda, xallinta, cabbirka dareeraha ama dareemayaasha, midka ugu fiican, iwm, si kastaba ha noqotee, sidoo kale softiweer sax ah ayaa lagama maarmaan u ah farsamaynta muuqaalka ugu fiican. Xaqiiqdii, ma jiraan wax yar oo sawir qaadeyaal ah oo xitaa muhiimad gaar ah siiya barnaamijka marka loo eego kamaradda taleefanka ee u gaarka ah taas oo fududeyneysa oo kicineysa hal-abuurka isticmaalaha, u oggolaanaysa qaababka toogashada ee kala duwan, iyo wixii la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles-yada leh kamarada ugu fiican
Cinwaanka wuxuu ahaan lahaa MOILAADAYAASHA CAMERAASKA UGU WANAAGSAN EE SI AAD ANDROID U AH ..... Dhex-dhexaadnimo la'aanta Waxaan qabaa
Jawaab Miguel Angel Villasante Rodriguez
Ma aragtay magaca baloogga?
Evert Ulises Jarmal Soto dijo
Jawaab si aad u rogto Ulises German Soto
laakiin waa been, illaa iyo hadda mobilka leh kamaradda ugu fiican waa htc u11 ...
Ku jawaab frans
Boostada xitaa ma ahan xperia xz ptemium